Nabad Suggida oo u dabaal degtay 46-sano guuradii ka soo wareegatay aas-aaska Sirdoonka Somaliya – STAR FM SOMALIA
Nabad Suggida oo u dabaal degtay 46-sano guuradii ka soo wareegatay aas-aaska Sirdoonka Somaliya
Hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka Somaliyed ayaa xalay u dabaal degay 46-sano guuradii ka soo wareegatay markii la aas-aasay Hay’adda Nabad Suggida Iyo Sirdoonka Qaranka Somaliyed.
Munaasabada Hay’adda Nabad Suggida waxa ay ku beegnayd 08-Bishan, balse xalay ayaa Xarunta Habar Khadiijo ee Magaalada Muqdisho lagu qabtay Dabaal dega xuska ciidanka Nabad Suggida.
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Wasiirka Amniga Wasiirka Warfaafinta iyo Wasiiro kale ayaa ka qaybgalay Munaasabada, iyadoo ammaanka si weyn loo adkeeyay.
Taliyaha ciidanka Nabad Suggida Somaliya C/raxmaan Maxamed Tuur Yare oo goobta ka hadlay, ayaa sheegay sanadkii la soo dhaafay ciidamada Nabad Suggida inay ku guuleysteen waxyaabo badan oo horumar ah, sidoo kalena ay fashiliyeen weeraro badan oo Shabaabka ay Muqdisho la damacsanaayeen.
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ku ammaanay ciidanka Nabad Suggida Somaliya dadaalka iyo naf hurnimada ay ugu jiraan xaqiijinta ammaanka dalka.
Waxa uu sheegay ciidanka Nabad Suggida inay yihiin holwkar muuqda oo u rafaadaya dalkooda iyo dadkooda intaba.
Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in dowladda Iiraan ay falal amniga iyo xasiloonida Soomaaliya lagu carqaladeynayo faraha kula jirtey